Create your own Proxy server ! - keywords HERE
Home » proxy server » Create your own Proxy server !
ဒီပို့စ်က ကို Kznt (မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်)ရေးထားတဲ့ပို့စ်ပါ။ ကျနော်အတွက်လေ့လာရင်းနဲ့ အခြားသူများအတွက်
ပါအကျိုးများအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုKzntရဲ့ပို့စ်များသည် ကျနော်အမြဲဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်Create your own Proxy serve - ဆိုတာကို လေ့လာနိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုဝင်တော်တော်များများ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကျော်ခွရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင် Proxy Sever တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ကိုဖိုးလပြည့်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်နောက်ကနေ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး ပေးသွားချင်ပါတယ်။ Technical Knowledge ဘာမှ သိဖို့ မလိုပါဘူး – ဟိုထည့်ဒီထည့် စာရိုက်တတ်ရင် ရပါပြီ။
တကယ်တော့ Proxy Sever တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ ထင်သလောက်ကြီး ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး – ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း သုံးနေကျ Google search ကိုသုံးပြီး ရှာလိုက်ရင် proxy servers တွေကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ သိပ်အသုံးတည့်တဲ့ PHP scripts တွေ အင်တာနက်ထဲမှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ခဏချင်းလဲ proxy servers တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက် တစ်ခု ရှိတာက PHP ပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ Proxies တွေဆိုတာ proxy scripts တွေကို host လုပ်ထားနိုင်ဖို့ web server တွေလိုအပ်ပြီး – ကိုယ့်ရဲ့ proxy site ကို အသက်သွင်းနိုင်ဖို့ အတွက် domain name တစ်ခုလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် – ဤ ကျော်ခွဆိုဒ် ဖန်တီးနည်းအား အသုံးပြု၍ Proxy server များ မဟားတရားဖန်တီးပြီး မဟုတ်တမ်းတရား ဆိုဒ်များ ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း ခွင့်မပြု – သတင်းရရှိပါက Myanmarfamily ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်း ခံရမည်။